किन बढ्दैछ अस्ट्रेलियामा आत्महत्याका घट्ना? एक महिनामै ३ नेपाली विद्यार्थीद्वारा देहत्याग :: Setopati
किन बढ्दैछ अस्ट्रेलियामा आत्महत्याका घट्ना? एक महिनामै ३ नेपाली विद्यार्थीद्वारा देहत्याग
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, भदाै १७
पछिल्ला महिना अस्ट्रेलियामा कोरोनाको कहरसँगै नेपाली युवाहरुको आत्महत्याका घटना बढेका छन्। एक महिनामा मात्र तीन नेपाली युवाले मानसिक बिचलनका कारण आत्महत्या गरेका छन्।
चार हप्ताअघि एडिलेडमा ललितपुर हात्तीवनका अमितले पासो थापेर देह त्याग गरे। त्यसको एक हप्ता बित्न नपाउँदै सिड्नीको टेम्पे पार्कमा दोलखाका थापा थरका एक युवाले सार्वजनिक पार्कमै पासो हालेर मृत्यवरण गरे। लगत्तैको हप्ता बित्न नपाउँदै सिड्नीको लिडकम्ब ट्रेन स्टेशनमा बागेश्वरी मनहराका खड्का थरका युवाले ज्यान फाले।
अस्ट्रेलियामा पछिल्ला दिनमा नेपाली समाज बढ्दै जाँदा समस्या पनि बढ्न थालेका छन्। एनआरएन अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष तथा साउथ अस्ट्रेलिया संयोजक नविन पन्थ सही सूचनाको अभाव, फरक परिवेश र अलग सोचका कारण पनि युवाहरु यता आएपछि समस्यामा परेको बताउँछन्।
आफ्ना समस्या नदेखाउने र आवश्यक उपचार पनि नगर्ने हुँदा नेपाली विद्यार्थी मानसिक समस्यामा परेको नविन बताउँछन्। उपाध्यक्ष पन्थले गत महिना मृत्युवरण गरेका अमितको लाश यसै हप्ता नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको बताए।
उज्वल भविष्यको निर्माण र पारिवारिक खुसीका लागि वैदेशिक अध्ययनमा आएका युवाहरु बन्द बाकसमा लाशका रुपमा नेपाल फर्कदा अभिभावकको पीडा कस्तो होला? ‘हतारमा निर्णय र फुर्सदमा पछुताउने हाम्रो परिवेश नै मुल कारण हो’ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनका पूर्व अध्यक्ष रहेका विजय सापकोटाले भने।
यहाँको अवस्था, अध्ययन प्रतिष्ठान, पर्न सक्ने अप्ठयारा, काम र मामको व्यवस्थापनका बारेमा सही सूचना नलिइकन आउँदा पनि समस्याको चाङ खडा भएको सापकोटाले बताए।
‘सूचनाको अभाव र विदेशिने रहरले पनि नजानिदो समस्या खडा भैरहेको देखिन्छ, हामीले पटक पटक भन्दै आएका छाैँ कि शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिनु अगाडि एक पटक सम्वन्धित देशको अवस्था र अध्ययनका बारेमा अभिभावकसहित विद्यार्थीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ सापकोटाले भने।
अहिले कोरोनाका कारण विश्व नै आर्थिक समस्याको चपेटामा रहेकाले सबैजना सम्हालिएर अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको उनले बताए।
आर्थिक कारोबारमा फसेकाले दोलखाका युवाले डोरीको पासो लगाएर ज्यान गुमाएकाे उनीसँग नजिक रहेकाहरुले बताएका थिए।
'यस्ता विषयमा अब अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी भैसकेको छ, महिनाा ३ नेपाली विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नु भनेको सानो कुरा हैन' सञ्चारकर्मी डिल्ली ढकालले भने।
आन्तरिक समस्या थपिँदा तनाव बढ्ने र पछि मानसिक रोगको शिकार हुँदा आत्महत्याका घटना बढेको हुन सक्ने ढकालको भनाइ छ।
एनआरएन अस्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी भन्छन् 'डलर र कलर फेर्ने रहरमा विदेशिने, यहाँ आएपछि पीडित बन्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आउँछ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरु त्यति जानकार देखिँदैनन्।'
विदेशमा उच्च अध्ययनमा आउनुअघि यहाँको अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कयैन बिध्यार्थीले पीडा भोग्नु परेको बताउँछन् डा रेग्मी। उनले भने 'यहाँ सम्भावना पनि प्रशस्त छ, अनि समस्याका पहाड पनि उत्तिकै छन्, यसबीचमा आफूलाई सम्हाल्न नसक्दा र कमजोर मानसिकताका कारण यस्ता गम्भीर घटना घट्ने गरेको छ।'
लिडकम्बको ट्रेन स्टेशनमा ज्यान फालेका विद्यार्थीका भान्जा नाता रहेका राज भन्छन्- 'एक दिनअघि मात्र उहाँसँग कुरा भएको थियो, स्टुडेन्ट भिषाबाट प्रोटेक्सन भिषामा गएको जानकारी गराउनुभएको थियो।'
केही पैसा कमाएर नेपाल फर्कने तयारी समेत रहेको उनले बताए। एउटा विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिषाबाट प्रोटेक्सन भिषासम्म पुग्नुका पछाडि कारण धेरै हुन सक्छन्।
यतिखेर अस्ट्रेलियामा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च अध्ययनमा रहेको अध्यागमनको तथ्यांकले देखाउँछ। संख्यात्मक रुपमा हवात्तै वृद्धि भएसँगै समस्याका पहाड पनि चुलिँदै छन्। त्यसमाथि पनि केही महिनायता कोरोनाको कहरका कारण कयैन विध्यार्थीहरुले काम र दाम गुमाएको अवस्था छ।
यस्तो परिस्थितिको डटेर सामना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहने, समस्या भए तुरुन्तै राखिहाल्ने र समाधानको बाटो खोज्ने, तत्कालै समस्या जटिल बनेमा एनआरएन, राजदूतावास लगायतका संघ संस्थालाई सम्पर्क गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने सुझाउँछन्, एनआरएनका युवा संयोजक इर्शाद अहमद।
'नेपालीमाा आफ्नो समस्या लुकाउने सबैभन्दा खतरनाक बानी छ, जसले हामीलाई सधै गलत बाटोमा डोहोर्याउँछ,' इर्शादले भने, 'समस्यालाई खुला रुपमा अभिभावक, साथीभाइसँग राख्दा पनि समाधान निस्कन सक्दछ जुन काम हामी गर्दैनौँ, यसले पनि मानसिक रुपमा निर्वल बनाउने काम गरेको छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७, ०५:०८:००